Isiokwu:7 Ụzọ Sugar Ebibie gị mmekọahụ ndụ
Site: Fisayo February 28, 2017
Ọ dịghị mkpa ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị: ngafe sugar bụ ihe ọjọọ n'ihi na gị na ya na-egbu gị mmekọahụ ike. Ya mere ọ bụrụ na ị na-aṅụ a otutu sugar na sweetened ọṅụṅụ na mmanya ọtọ bịrịbịrị na snacks, ọ bụ nnukwu oge na ị na-egbutu ya mbo mbuli gị mmekọahụ ndụ ma ọ bụ ị nwere ike onwe gị na-ata ụta na nwunye gị ewee na-eti maka ihe ozugbo.
Sugar akpata erectile dysfunction: Sugar na-emetụta ọdịdị nke ngwaọrụ nitric oxide na testosterone nke ma ndị ikom ma ndị inyom kwesịrị mmekọahụ mbanye na ọrụ. Nweta a nri: testosterone na-akwalite ma penile na clitoral erection, mkpa site nwoke ifịk mmekọahụ na nwaanyị maka atọ ụtọ orgasm.
Sugar na-akpata oké ike ọgwụgwụ: Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka a na-atọ ụtọ n'abalị ma ka na-erepịakwa tọn sugar si snacks na mmanya ọtọ bịrịbịrị, mgbe ahụ ị nwere ike nakwa na-agwa gị mmekọahụ ndụ a bye-bye. Mgbe ọbara gị sugar adahade, na pancreases overworks ya secrete ezu insulin na-ebu sugar ma gbochie ngwa mmebi, na a na-ewe a ọnụ ọgụgụ na ozu ma ọ bụrụ na gị ahu mgbe niile nwere na-arụ ọrụ na-ebelata ọbara sugar.
sugar akpata ibu oké ibu: Ukwuu shuga dị n'ọbara na-eduga ná kacha ibu oké ibu ma ọ bụrụ na onye na-adịghị egosipụta na agbanwe ya. Na ibu oké ibu na-abịa ụdị 2 -arịa ọrịa shuga nke na-akpata erectile dysfunction na-akpata ịkwa obi nkoropụ n'ihi na di na nwunye.
Ngafe eduga mmamiri nkụ: Ọtụtụ nnyocha na-mkpa corroborate a, ma ole na ole ọmụmụ hụrụ a mmekọrịta dị n'etiti ngafe sugar na mmamiri nkụ na ndị inyom. Nke a dị ka ị maraworị akpata na-egbu mgbu mmekọahụ kama na-atọ ụtọ mmekọahụ.
sugar akpata nje na yist na-efe efe: Nke a bụ fọrọ nke nta yiri na n'elu, ma elu ọbara sugar-emepụta a eme ebe nje bacteria na yist na-eto eto na ikpu, na-eduga na eriri afo ma ọ bụ urinary tract ọrịa nke ga-n'aka-emetụta mmekọahụ na ndị inyom.
Sugar na-egbu gị mmekọahụ homonụ: Mgbe i nwere shuga ókè na ọbara gị, ọ na-emetụta mmepụta nke endorphins, serotonin na dopamine ndị ọzọ homonụ nke so na ike mmekọahụ ọrụ. An oge ufodu larịị nke ndị a homonụ ga emebi mmekọahụ, na-eme ka lovemaking a mụụrụ di na nwunye na a ịhụnanya.
Sugar na-eduga ná iche echiche na aru nchegbu: Blood sugar e atụ aka na-ebili cortisol larịị, na-eduga na nke uche na ahụ nchegbu nke n'aka nke na-emetụta mmekọahụ stimuli na nzaghachi. Iji na-enwe a na-akwụghachi ụgwọ oge na nwunye gị, gị mkpa ibelata sugar na-ahụ otú gị kenwe ekele maka nke a aga na-enyere ha na-arụ ọrụ mma na-eje ozi gị na-akpachi anya mkpa.
-Akpa na-ekwu okwu on "Bad News: 7 Ụzọ Sugar Ebibie gị mmekọahụ ndụ"